Nagu saabsan - Dongguan Yong Fang Elektaroniga Teknolojiyada Co., Ltd.
Dhag-dhegaha Run-la'aanta ah
ANC Dhagaha la aanta
ANC Wireless Headset
Dongguan Yong Fang Farsamada elektarooniga Co., Ltd.
waamid ka mid ah soo saaraha xirfadleyda ah ee ka soo jeeda Donguan, Guangdong, Shiinaha. Waxaan haynaa in kabadan 23 sano oo khibrad adeeg ah oo ah soosaarida caalamiga ah ee OEM iyo ODM oo ku saabsan maqal iyo xadhkaha Dhegaha leh iyo samaacadaha dhagaha.
Ilaa aasaaskii 1998, waxaan diirada saareynaa naqshadeynta, soo saarista, iyo suuqgeynta tayo sarre leh ee wireless-ka & siligga dhegaha leh iyo samaacadaha dhagaha. Hadda, taxanaheenna ugu waaweyn ee alaabta soo saara waa dhawaaqa firfircoon ee baajinaya samaacadaha dhagaha, samaacadaha dhegaha lah ee rikoodhka ah ee dhabta ah, dhagaha dhageysiga ciyaaraha ee makarafoonka laba-geesoodka ah, sameecadaha dhegaha leh ee wireless-ka ah, dhegaha-dhegaha isboortiga wireless-ka ah iyo dhegaha-dhegaha fiilooyinka leh.
Warshadeena cabirkeedu dhan yahay 6000 mitir murabac oo si buuxda u qalabaysan, waxaa ku yaal 8 khadad wax soo saar oo si fiican u qalabaysan Isku soo wada duuboo, waxaan haynaa in ka badan 120 shaqaale xirfad iyo khibrad leh. Awoodda wax soo saar maalinle ah waa illaa 5000-8000 kumbiyuutar. Ka sokow, waxaan haynaa koox xirfadlayaal R & D ah oo loogu talagalay naqshadaha cusub iyo hal abuurka cusub, oo ay ku jiraan injineerada 3D, injineerada korantada, injineerada acoustic, naqshadeynta naqshadeynta iyo in ka badan.
Dhammaan alaabooyinka ka soo baxa warshadeenna, waxay si adag u hubiyaan kooxdeena iyada oo ku saleysan kalsoonida iyo heerarka nabadgelyada ee shaybaarkayaga baaritaanka lagu kalsoonaan karo, iyo badeecadaha badankood, waxay la jiraan CE, ROHS, Reach, FCC, Sound pressure, KC iyo warbixinno kale oo imtixaan ama shahaado ah.
Hadafkeenu waa inaan noqono saaxiibkaaga mustaqbalka fog ee wax soo saar caalami ah oo bixiya wax soo saar iyo adeegyo wanaagsan. Ilaa hadda, waxaan si daacadnimo iyo xirfadba leh u bixinaynay alaab asal ah, hal-abuur leh, oo tayo leh iyo adeegyo ku qanacsan macaamiisha in ka badan 100 macmiil oo ka kala yimid in ka badan 87 dal iyo deegaanno kala duwan.
Dong Guan Yong Fang Farsamada elektarooniga Co., Ltd.
No.12, Long'an Wadada, Shigu, Tangxia, Dongguan, Guangdong, 523729 Shiinaha